Nagu saabsan - Amber Mission
"Ugu Fiican Nalalka Dibedda
Keen jawiga iyo amniga gurigaaga dibadda "
Amber Lighting waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo la aasaasay sanadkii 2012. Tan iyo markii aan aasaaskeena hoos u dhignay, diirada aan saareyno had iyo jeer waxay siineynaa macaamiishayada aduunka oo dhan xalal iyo alaabooyin nalalka "tayo iyo kalsooni leh".
8-dii sano ee la soo dhaafay, waan sameynay nalalka muuqaalka, nalalka darbiga, nalalka boostada, nalalka daadadka, nalalka jardiinada, nalalka bollard, nalalka waddooyinka.
Iyada oo dalabyo cusub iyo tikniyoolajiyaddu ay soo galayaan nolosheena, waxaan hadda sidoo kale siineynaa nal caqli-gal ah howlo cusub, sida nalalka beddeli kara midabka RGB, wifi ama nalalka gacanta lagu hago ee Alexa, nalalka ku shaqeeya cadceedda.
Waxaan sidoo kale sameyneynaa alaabooyin gaar ah. Adoo noo soo diraya sawirada iyo cabirrada, waxaan sameyn karnaa naqshadeynta, waxaan furi karnaa caaryada, waxna waan usameyn karnaa adiga.
Yaan u Shaqeynaa
Waxaan kalsooni ku qabnaa in wadashaqeynteena wadajir, aad uheli doontaan khibrad aan caadi aheyn. Waxaan fileynaa farriimo iyo weydiin adduunka oo dhan.
♦ Milkiilayaasha Noocyada
♦ Shirkadaha Ganacsi
♦ Qandaraaslayaasha Mashruuca
Sida Aan U Korayno
Waan kuu shaqeyneynaa, waana kula koraynaa.
Amber wuxuu bilaabay ganacsi hoggaamineed isagoo ah warshad yar oo ay la socoto koox farsamo yaqaan ah.
Ballaarinta khadka Golaha
Labo haa kadib, waxaan ku qalabeynay mashiinada SMT iyo 3 khadadka isku imaatinka. Waxaan haysanay xirfadlayaal badan oo aan kubiirno kooxaheena, waxaan helnay laba iibin marka loo eego sanadkii lasoo dhaafay.
Baahida weyn ee loo qabo qalabka nalalka, halkii aan aadi lahayn sheybaarada kale si loo baaro, waxaan maalgashanay shaybaarradeena.
Horumarinta Aagga Nalalka Cusub
Waxaan la shaqeyneynaa alaab-qeybiyaha cusub ee xakamaynta si aan u helno xalalka nalalka casriga ah, waxaan naqshadeyneynaa nalalka RGB, nalalka kontoroolka wifi, nalalka qoraxda oo leh dareemayaal.